နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၄) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on February 9, 2015 at 11:03 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့ အပိုင်း (၂၄) မှာတော့ တိရိစ္ဆာန်များနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းများကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
That’sabeautiful cat! I wonder who it belongs to.
It belongs to the Browns. They live across the street from us. They have three cats, two dogs andacanary.
They certainly must like pets! But how do all those animals get along with each other?
Don’t ask me, ask the Browns!
ဒီဟာက indirect question ဖြစ်တဲ့အတွက် word order ကိုသတိပြုပြီးကြည့်ပါ။ preposition
(to) ကပုံမှန်အားဖြင့် နောက်ဆုံးမှာနေတယ်။ I wonder whom it belongs to တို့ I wonder to whom it belongs လည်း grammar အရမှန်ကြသော်လည်း ပြောရ ရေးရတာ သဘာဝမကျ၊ အူကြောင်ကြောင်နိုင်လှ ပြီး ဒီ context မှာသုံးဖို့မသင့်တော်ဘူးပေါ့နော်။
three cats, two dogs, andacanary
Cats, dogs, canary တို့ မှာ intona­tion ကိုမြှင့်ပြောရတယ်။
they certainly must like pets
ဒီမှာသုံးသွားတဲ့ must က (ဖြစ်ရမယ် / တူတယ်) စတဲ့ probability or supposition ဖြစ်တဲ့ must ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ usage ရဲ့အခြား ဥပမာ တွေကတော့
It must be going to rain—it's so dark outside. (အပြင်မှာ မှောင်မဲနေပြီ - မိုးရွာတော့မယ်။)
They must not be home yet—they didn’t answer the telephone. (သူတို့ ဖုန်းမကိုင်ဘူးဆိုတော့ အိမ်ပြန်မရောက်ကြသေးဘူးဖြစ်မယ်။)
That tree must be thirty feet tall—it's higher than the roof of the house. (ဒီသစ်ပင်က အိမ်ခေါင်မိုးထက်မြင့်တယ်ဆိုတော့ ပေ သုံးဆယ်လောက် ရှိမယ်။)
Get along with each other = live harmoniously and compatibly.
တဲ့သည်၊ ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း အတူတူယှဉ်တွဲနေထိုင်သည်ပေါ့။
သင့်ရဲ့စကားဝဲသံ (accent) က သင့်အကြောင်းဘာများပြောနေပါလိမ့်။
ပေါက်သွားနိုင်သည့် အရောင်း အီးမေး(လ်)တွေကို ဘယ်လိုရေးရမလဲ?
Permalink Reply by khaingzarmon on February 9, 2015 at 23:12
Permalink Reply by Thitthit Khine on February 10, 2015 at 16:59
Permalink Reply by ayesnake on February 10, 2015 at 22:17
Permalink Reply by K Lwin on February 13, 2015 at 15:54
Thanksalot, poster! Wish you possess much knowledge than we know. !! :)
Permalink Reply by mohmoh on February 17, 2015 at 15:03
Permalink Reply by Htun Htun Soe on February 19, 2015 at 11:46